Ahoana ny fanefana sy ny proxy tsy fantatra anarana - Ikkaro
firosoana >> Ny fiarovana ny informatika >> Mizaha amin'ny proxy
Ny fitetezana miaraka amin'ny proxy dia fomba iray hafa hahafahana mizaha miafina, na raha ny amiko izao dia afaka mivoaka amin'ny firenena iray, izany hoe mivezivezy amin'ny fomba hinoan'ny tranonkala fa ao amin'ny firenena iray isika ..
Ny andro hafa dia nanazava aho ny fomba hanerena ny TOR, hamoaka anay amin'ny vodin'ny firenena iray. Fa raha vao nanomboka tamin'ny fitsapana aho dia afaka nanao fanamarinana tany amin'ny firenena maro, fa ny an'ny hafa toa an'i Portugal, tsy afaka aho, satria toa tsy misy node fivoahana any Portugal ary mieritreritra mandrakariva ny TOR
Voavaha ilay olana mifandray amin'ny proxy hanamboarana ohatra ny fizahana avy any amin'io firenena io.
Manana fomba 3 hijerena an-tsokosoko anarana na hamboamboarina fa any an-tany hafa isika. Miaraka amin'ny proxy, miaraka amin'ny VPN ary miaraka amin'ny TOR. Ny tsirairay dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka entiny. Raha liana ianao dia hamela lahatsoratra iray mampitaha azy ireo aho.
Mizaha amin'ny alàlan'ny proxy
Eto aho hanazava ny fomba fivezivezena amin'ny proxy.
Ny proxy dia solosaina hafa ampiasainay ho mpanelanelana. Rehefa mivezivezy amin'ny proxy izay ataontsika isika dia mifandray amin'ny solosaina hafa izay hanao fangatahana amin'ny tranokala, amin'ity fomba ity dia tsy hita ny ip. Izy io dia ny fametrahana solosaina eo anelanelan'ny tranonkala tiantsika ho hita sy ny tenantsika. Ary tena tsotra izy io, mila manamboatra ny browser fotsiny ianao.
Mazava ho azy manana risika fiarovana, noho izany tsy ampirisihiko hiditra amin'ny proxy ny kaonty mailaka, banky na serivisy marimaritra iraisana.
Efa fantatrao fa tonga ireto ohatra ireto satria mila jereko ny fihetsiky ny singa geolocation sasany amin'ny tranokala asa. Ary amin'ity fomba ity dia azoko atao ny mody milaza fa olona miditra amin'ny firenena mahaliana ahy aho ary hitako raha mandeha tsara ireo tranonkala.
Firefox no ampiasaiko, saingy mora toy izany ao amin'ny Chrome.
Ampifanaraho tsikelikely ny Proxy
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mitady ny mpisolo toerana antsika. Ho an'izay, mila mitady fotsiny ao amin'ny Google ianao ary hanana lisitra am-polony. Nikaroka fotsiny ny "proxy Portugal" izay firenena mahaliana ahy.
Ao amin'ny sary dia mahita proxy vitsivitsy isika, mila mampiasa ny adiresy IP, ny port ary ny protokolota isika. Zava-dehibe ihany koa ny fiheverana ny hafainganana, ny fahazoana ary ny valiny, indrindra raha hampiasa azy io tsy tapaka ianao.
Eo ihany koa ny olan'ny tsy mitonona anarana, manapa-kevitra ianao fa zava-dehibe ny anarana tsy fantatra anarana amin'ny fampiasana izay homenao azy
Ankehitriny dia hamboarintsika ny navigateur, amin'ity tranga ity Firefox
Manokatra ny Menu> Préférences
Ary amin'ny safidin'ny Jeneraly, hidina hatrany amin'ny farany ambany isika izay Tetikasa tambajotra
Tsindrio ny Settings ary misy varavarankely misokatra miaraka amin'ny fandaminana ny fifandraisanay.
Nisafidy ny ip voalohany misy ba kiraro v4 aho
Tena zava-dehibe izany rehefa mijanona tsy mampiasa ny proxy ianao dia ovao ny setting raha miverina amin'ny "No proxy"
Raha http ny protocol dia tokony nofenoinao ny Proxy HTTP. Mora be
Raha vao voalamina sy ekena, mankanesa any amin'ny motera fikarohana ary ampidiro ny iray amin'ireo tranonkala milaza aminao ny toerana misy anao (izay ny ip aho na inona ny ip-ko) ary zahao fa tena manamarika izany fa ao amin'ny firenena nofidinao ianao ary tsy hita ny tena IP-nao.
Tamin'izany no namahako ny olan'ny fitetezana zara raha tany amin'ny firenena iray aho. Amin'ireo safidy telo nodinihintsika dia io no tiako indrindra amin'ny fitsidihana tsy mitonona anarana, fa tsara foana ny mahafantatra ny fomba fiasa raha manana loharano sy fitaovana bebe kokoa ary afaka mampiasa azy io rehefa mahaliana antsika izany.
Sokajy Ny fiarovana ny informatika Ticket navigation